‘ग्रुप अफ डेथ’बाट जर्मनी, फ्रान्स र पोर्चुगल अन्तिम १६ मा जालान् ? – Media News Khabar
‘ग्रुप अफ डेथ’बाट जर्मनी, फ्रान्स र पोर्चुगल अन्तिम १६ मा जालान् ?
काठमाडौं । युरोकपमा आज ग्रुप अफ डेथका टोलबीची भिडन्त हुँदैछ । समूह चरणका अन्तिम खेलहरु सकिने टिमको टुंगो लाग्ने हुँदा मध्यराति हुने खेल समूह एफका जर्मनी, फ्रान्स र पोर्चुगल तीनवटै टिमका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।समूहमा फ्रान्स चार अंकसहित पहिलो स्थानमा छ । जर्मनी र पोर्चुगल तीन तीन अंकसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
आज राति गत युरोका फाइनलिस्ट फ्रान्स र पोर्चुगल भिड्दैछन् । गत युरोमा १-० ले उपाधि गुमाएको फ्रान्सलाई यसपटक बदलाको अवसर हुनेछ । बराबरी भए दुवै टिम अन्तिम १६ पुग्नेछन् ।पोर्चुगलले फराकिलो हार बेहोर्यो भने समूह चरणबाटै बाहिरिन पनि सक्नेछ । तर, जर्मनीले पनि हंगेरीविरुद्धको खेल जित्नुपर्नेछ । जर्मनीविरुद्ध फराकिलो जित हात पारे हंगेरी पनि अर्को चरणमा पुग्नेछ ।६ समूह प्रत्येकबाट दुई दुई टिम अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्नेछन् । समूहमा तेस्रो हुने चार टिम पनि अन्तिम १६ प्रवेश गर्नेछन् ।
चारमध्ये स्वीटजरल्याण्ड र चेक रिपब्लिक अन्तिम १६ मा प्रवेश गरिसकेका छन् ।यस्तोमा अब चार टोलीमध्ये अंक, गोल अन्तर, फेयरप्लेमा अगाडि हुने २ टिम अन्तिम १६ मा जानेछन् ।समूह चरणका अन्तिम खेलहरु सकिने टिमको टुंगो लाग्ने हुँदा मध्यराति हुने खेल समूह एफका जर्मनी, फ्रान्स र पोर्चुगल तीनवटै टिमका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।समूहमा फ्रान्स चार अंकसहित पहिलो स्थानमा छ । जर्मनी र पोर्चुगल तीन तीन अंकसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।आज राति गत युरोका फाइनलिस्ट फ्रान्स र पोर्चुगल भिड्दैछन् । गत युरोमा १-० ले उपाधि गुमाएको फ्रान्सलाई यसपटक बदलाको अवसर हुनेछ । बराबरी भए दुवै टिम अन्तिम १६ पुग्नेछन् ।
Previous अब एमालेको एकल सरकार
Next विश्व टेष्ट च्याम्पियनसिप फाइनलः नतिजाको टुंगो छैटौं दिनमा लाग्ने